မီးငယ်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: July 2010
အိမ်ကလေးဆီ ပြန်ရောက်လာပါပြီ .. ကဲ .. မီးငယ် ဒီနေ့ ဘာတွေ လုပ်ပါလိမ့် .. ဒိုင်ယာရီ ရေးမယ် ကြံကာမှ ပြန် စဉ်းစား ရပြန်ပေါ့ .. သိပြီ ... မနက်က ရုံးလစ်တာပဲ .. ဟိ .. ခေါင်းကိုက်တာ နည်းနည်း ကို အိပ်ယာမနိုးတာမို့ ရုံးပြေး လိုက်ပါတယ် .. ကုန်ပြန်ပြီပေါ့ ခွင့်တရက် ... အိပ်ပစ်လိုက်တာ နေ့တ၀က် :D အိပ်ယာနိုးတော့ အ၀တ်တွေလျှော် .. အ၀တ်တွေလှမ်း .. နေကပူနေတာမို့ မီးငယ်ရဲ့ ကုတင်ပေါ်က မွေ့ယာတွေပါ ထုတ်လှမ်း .. ( တကယ်တော့ ကုတင်မဟုတ် .. ဒန်းလော့ပ် သက်သက်သာ :D ) အရင်နေ့က လျှော်ထားလို့ ခြောက်နေတဲ့ အ၀တ်တွေ မီးပူတိုက် .. အခန်းကိုလှည်းကျဉ်း ... အကုန်လုံးပြီးလို့ နာရီကြည့်တော့ ၃ နာရီ .. မြတ်စွာဘုရား .. ဖြစ်သေးဘူး . KUYAKUSHO ( မြန်မာအခေါ်တော့ မြို့နယ်ရုံး ) ပေါ့လေ ... သွားရဦးမှာပဲ .. အိမ်ပြောင်းတာက ဇွန်လ ၂၅ ရက် ထဲက .. ခုထိ လိပ်စာပြောင်းက မလုပ်ရသေးဘူး .. အဲ့ဒါနဲ့ မီးငယ်လည်း ရေကမန်းကတန်းချိုး .. ရှိုးထုတ် .. အဟဲ .. လက်စွဲတော် စက်ဘီးကို ဆွဲလို့ အိမ်ကထွက်မယ်လုပ်တော့ ၄နာရီခွဲ ... ဟုတ်တော့နေပြီ .. ရုံးက ၅နာရီပိတ်မယ် .. ဘတ်စ်ကားလည်း ရောက်ပေမယ့် အသွား ၄၀၀ အပြန် ၄၀၀ဆိုတော့ မကိုက်သေးဘူးလေ .. ၈၀၀တောင် ကုန်တော့မယ်ပေါ့ .. အဲ့ဒါနဲ့ပဲ စက်ဘီးကိုဆွဲလို့ ခပ်တည်တည် ထွက်လာခဲ့တယ် .. လမ်းကျတော့ သူများမေးပြီးနင်းရတော့မှာပဲပေါ့ .. ( ဟုတ်တယ်လေ .. ကိုယ်မှ လမ်းမသိတာ ) အဟဲ .. ဒီနေ့ မီးငယ် ကံကောင်းတယ် .. မီးပွိုင့်မှာ စောင့်တုန်း ကောင်လေးတယောက် တွေ့လို့ သဘောကောင်းမယ့်ပုံလေးပေါ့ ( အဟဲ အထင်နဲ့ အမှတ်ပေးတာ ) TOYOCHOU ကို ဘယ်လိုနင်းရမလဲ လို့ မေးတာ .. ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီသွားမှာ တူတူလိုက်နင်းတဲ့လေ .. အိုခီပေါ့ .. တလမ်းလုံး အိုင်ပေါ့နားထောင်ရင်း စကားတခွန်းမှ မပြောဘဲ သူ့ကို ကျော်ကျော်နင်းမိလို့ ထင်ရဲ့ .. မျက်စောင်းထိုးရှာတယ် ကျေးဇူးရှင်က .. ( အမှန်တော့ ကိုယ်က စက်ဘီးကို လူလို မနင်းတတ်ဘူး အမြဲ အသည်းအသန်နင်းနေကျ .. :D ) လိုက်တော့ ပို့ပေးရှာပါတယ် .. TOYOCHOU လည်းရောက်ရော ကိုယ်က သွားတတ်ပြီ .. KUYAKUSHO ဘယ်နားရှိလဲ ကိုယ်သိတယ်လေ .. အဟဲ .. ဒါနဲ့ပဲ ကျေးဇူးနော် ဆိုပြီး လစ်လာတာ .. ရောက်ပြီ ၄နာရီ၅၀ အတိ .. လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ ဖြည့်ပြီး ထိုင်စောင့် .... ကဒ်ပြန်ထွက်လာတော့ အာမခံတွေရော လုပ်ထားရဲ့လားတဲ့ .. လာစစ်တယ် .. ကိုယ်လည်း ခပ်တည်တည်ပေါ့ .. အဟဲ .. ရုံးကလုပ်ပေးထားတဲ့ ကဒ် ထုတ်ပေးလိုက်တော့ . အိုကေ တဲ့ .. ဒါဆို ရပြီတဲ့ ... ပြန်မယ်လုပ်တော့ ၅နာရီခွဲ ... အပြန်လမ်းကျတော့ ဖြောင့်လို့ .. ဖြူးလို့ .. မီးငယ် တို့က လမ်းမှတ်တာတော့ အသေကျွမ်း .. မနက်ပိုင်းက ဖျားလို့ဆိုပြီး ခွင့်ယူထားတဲ့ မီးငယ် .. ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့် လူကြီးကသာ မြင်ရင် ဖနောင့်နဲ့ ပေါက်ချင်စရာ .. :D .. စက်ဘီး တစီးနဲ့ လမ်းသလားနေတာလေ .. အိမ်ဘက်ပြန်ရောက်တော့ စူပါက မြင်ပြန်ရော .. ကဲ .. ဒါနဲ့ပဲ မနက်ဖြန် ထမင်းဗူးပေါ့ .. ၀ယ်မယ်ကွာဆိုပြီး တခါဝင် .. ကဲ .. စူပါထဲရောက်မှ ကန့်လန့်ဖြစ်ပုံ .. မီးငယ်တို့ မကြာမည် လာမည်မျှော် ................. :D
Posted by မီးငယ် at 10:40 PM0comments
ဒီအိမ်ကလေးကိုပြစ်ထားမိတာကြာပါပေါ့လား.... ကျွန်မဘာတွေလုပ်နေခဲ့မိပါလိမ့်.. တကယ်ဆို ကျွန်မသိပ်ချစ်တဲ့ နေရာလေးတခုပါ .... ဪ။ ကျွန်မ ရုံးအလုပ်တွေ အကြောင်းပြပီး အိမ်ကလေးကို ပြစ်ထားခဲ့မိတာပါလား.... ဘာတွေလုပ်ခဲ့မိသေးပါလိမ့် ..ကျွန်မစာမေးပွဲလည်းဖြေခဲ့သေးတာပဲ .. စာမေးပွဲကိုမှန်းထားတာထက်ဖြေနိုင်ခဲ့လို့ စာအုပ်တွေပေးခဲ့တဲ့မမမြရွက်ဝေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရသေးတယ် .. ကိုယ်ဝယ်ထားခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကအရာမယွင်းဘဲ မမပေးတဲ့ စီဒီကိုသာ နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တာမို့ မမကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... ချစ်တဲ့မမလည်း သူချစ်တဲ့ အိမ်ကြီးရှင်နဲ့ တူတူ ထာဝရပျော်နိုင်ပါစေ .. စာမေးပွဲအတွက်စာကြည့်မယ်ရည်ရွယ်ကာမှ ပရောဂျက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်ရပြန်တာမို့ စာလဲ လုံးဝနီးပါးကို မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ ... နောက်ထပ်ရောဘာတွေ လုပ်ခဲ့မိပါလိမ့် ..... မမျှော်လင့်ဘဲ တဆင့်တက်သွားခဲ့တဲ့ကိုယ့်နေရာလေး အတွက် ပြင်ဆင်နေခဲ့ရတာပဲ ။ အင်း .... ဒါလည်းပဲအကြောင်းပြချက်တခုပဲ ။ ဒီ ရက်ပိုင်းတော့ ဘာမှကို မလုပ်ချင်လောက်အောင် စိတ်ညစ်နေခဲ့တယ် .... ကျွန်မ ရဲ့ အကျင့်တခုက စိတ်ညစ်ရင် စက်ဘီး လျှောက်စီးတတ်တာပါပဲ .... လေပြင်းတွေတိုက်တဲ့တည ည ၁၂နာရီလောက် ကျွန်မရဲ့ အခန်းလေးကနေ ထွက်လို့ စက်ဘီးလျှောက်စီးမိတဲ့ရလဒ်က ကျွန်မ ဖျားတော့တာပါပဲ ... အင်း .... ဒါလည်းပဲအကြောင်းပြချက်တခုပဲ ။ ဪ ... များလိုက်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ... ကိုယ်မလုပ်နိုင်ခဲ့တာကို ဘာလို့များ အကြောင်းပြချက်တွေပေးနေမိပါလိမ့် .... ကဲ ... မတွေးတော့ပါဘူးဆိုကာမှတွေးနေမိပြန်ပီ ...................................................
Posted by မီးငယ် at 11:35 AM0comments